ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ ဦး တည်စေသောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ISO9001 စနစ်များနှင့် CE စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု၊ ဖန်ခွက်၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ acrylic၊ သားရေ၊ ၀ ါး၊ သစ်နှင့်ကျောက်စသည်တို့နှင့်မတူညီသောပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောခရမ်းလွန်ပြားပရင်တာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
လူကြိုက်အများဆုံး rotary ခရမ်းလွန် ...
အိတ်ဆောင် Multi အရွယ်အစားခရမ်းလွန်ပရင်တာအိတ်ခ်ျတီဘီပြားပြားပုံနှိပ်စက်နှင့် Flat နှင့် Cylinder ပုလင်းကယ်ဆယ်ရေး 3D ဖောင်းကြွမှုအတွက် Rotary နှင့်အတူ
ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာ applications များ:
ခ။ ဖန်၊ ကြွေထည်လုပ်ငန်း;
ခရမ်းလွန်ပရင်တာပရင်တာဒစ်ဂျစ်တယ် 8 အရောင်ဒီဂျစ်တယ်ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာ
ကြီးမားသောအရွယ်အစားသေးငယ်သောခရမ်းရောင်အပြားပြားပရင်တာပရင့်တာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရောင်၊ အဖြူနှင့်အရောင်တင်ခြင်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်နောက်ပြန်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်လည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုအမျိုးမျိုးအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ။
၁။ Epson i3200-u / Epson 4720 / Ricoh G5i ၏အမျိုးမျိုးသောပုံနှိပ်ခြင်းများ
(၄) LED အအေးခံအပူချိန်ကုသသည့်နည်းပညာကိုသုံးပါ၊
ပြပွဲခင်းကျင်းပြသခြင်း / နောက်ခံနံရံ / သစ်သားပုံနှိပ်ခြင်း / သတ္တုထုတ်ကုန် / KT ဘုတ် / Acrylic တံဆိပ်များ / acrylic မီးအိမ် / ဖန်နောက်ခံ / ထုပ်ပိုးသေတ္တာ / အနုပညာနှင့်လက်မှုလက်ဆောင်များ / လက်ကိုင်ဖုန်းအိတ်များ
၁။ ပုံနှိပ်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး၊ Ricoh, Konica;
(၄) LED အအေးခံအပူပေးသည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ၊
ပုံနှိပ်စက်နိမိတ်လက္ခဏာစက်ပရင်တာ UV ပြား
၁။ ခရမ်းလွန်ပြားသောပရင်တာသည် Ricoh Gen5 printhead ကိုအသုံးပြုသည်၊ ပြေးခုန်မတက်ဘဲအချိန်နှင့်ခွန်အားသက်သာစေသည်။
၂။ LED UV lamp ကိုအသုံးပြုစဉ်တွင်အပူမခံဘဲကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။
3. ခရမ်းလွန်မှင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အနံ့မရှိသောအရာများ၊ ချက်ချင်းကုသခြင်းနှင့်အလွယ်တကူမပျောက်နိုင်ခြင်း၊
5. UV ပြားချပ်ချပ်ပရင်တာ Z- ဝင်ရိုးအမြင့်ကိုအလွယ်တကူရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ပါတယ်, လက်ရှိ 100mm ၏အမြင့်, ပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်;
၆။ ခရမ်းလွန်ပြားသောပရင်တာ hyperfine ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် 1440dpi ဖြင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု။
အရည်အသွေးမြင့်မားသော 3D ဒီဂျစ်တယ် Inkjet UV ပြားချပ်ချပ်ပရင်တာကျောက်စိမ်းစက်မှုပုံနှိပ်စက်
ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာများသည်လူတစ် ဦး ချင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းဆွဲသူများအတွက် uv ပရင်တာများသည်သူတို့၏ g ၀ ံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုကျေနပ်သည်အထိသူတို့သည်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဒီဇိုင်းနမူနာများကိုအလိုအလျောက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပုံစံများသည်ဓာတ်ပုံအဆင့်အထိပုံနှိပ်နိုင်သည်
ယေဘုယျအားဖြင့် full-color image ကိုတစ်ချိန်ကပြီးစီးခဲ့သည်၊ တဖြည်းဖြည်းအရောင်သည်ဓာတ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုံးလုံးလျားလျားရရှိသည်၊ တည်နေရာသည်တိကျသည်၊ အပိုင်းအစသည်သုညဖြစ်သည်၊ လူအင်အားနှင့်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များများစွာသိမ်းဆည်းပြီးအစစ်အမှန်ပန်းကန်မဟုတ်သောပုံနှိပ်ခြင်း သဘောပေါက်သည် ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ကာလတိုနှင့်ကာလလတ်လုပ်ငန်းများကိုပြီးမြောက်စေပြီးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အမြတ်အစွန်းများများရရှိရန်ကူညီသည်။
Phone Case၊ Glass, Cylinder ဘူးအမျိုးမျိုးအတွက် UV Flatbed Printer C + W + Varnish ခရမ်းလွန်ပရင်တာ
uv ပြားချပ်ချပ်ပရင်တာများအတွက်မူရင်း bai ထည့်သွင်းထားသောမင်ကိုအသုံးပြုရမည်။ မူရင်းမဟုတ်သည့် ink cartridges ကိုမသုံးရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ink cartridges အများစုတွင်ရေမြှုပ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီးမူရင်းမဟုတ်သော ink cartridges ၏ရေမြှုပ်များသည်များသောအားဖြင့် elution များစွာပါလိမ့်မည်။ မှင်ထွက်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်ထားသောသံမဏိစစ်ထုတ်မှုသည်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ မကြာခဏ nozzle ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်များကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။
လူကြိုက်အများဆုံး rotary ခရမ်းလွန်ပြားပြားပုလင်းပရင်တာစက်
ဖန်မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပုံနှိပ်ရန်ခက်ခဲသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမကျခြင်းနှင့်မှေးမှိန်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ကော်ကပ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုလှပစေရန်အတွက်မဖုံးအုပ်မီပုံသဏ္processedာန်ကိုပြုပြင်ရမည်။ ပုံနှိပ်ထားသောဖန်သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ကြွေထည်မြေထည်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်၊ ကြွေပြားများပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းပုံစံသည်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၌အမြဲတမ်းပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွေထည်မြေထည်များကိုမပုံနှိပ်မီရေစိုခံ၊ နေရောင်ခြည်နှင့်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။